अधिकांश पार्टीले अझैं उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेन्
राजविराज, १६ भदौं ।
असोज २ गते प्रदेश नं. २ मा हुन लागेको स्थानिय तहको निर्वाचनका लागि अहिले सिंगो २ नं. प्रदेश अन्तरगतमा ८ वटै जिल्लामा चुनावी माहौल तातेको छ ।
चुनावी महौलसँग सँगै अहिले ८ वटै जिल्लाका राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रचार प्रसार गर्दै मतदातासँग घरदौलो कार्यक्रम गर्दै डिहेका छन् ।
भदौं २१ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति भएपनि अहिलेसम्म अधिकांश दलहरुलाई आफ्नो उम्मेदवारको टुंगो लगाउन हम्मे हम्मे परेको छ ।
यता सप्तरी जिल्लामा नेकपा एमालेले आफ्नो उम्मेदवारको घोषणा गर्ने पहिलो पार्टी बनेको छ भने दोश्रोमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल रहेको छ । यद्दपी यी दुबै पार्टी मध्ये फोरम नेपालले जिल्लाको तीन स्थानीय तहमा अझ उम्मेदवारी टुंगो लगाउन सकेको छैन् ।
यता लामो समयदेखी आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निर्वाचनमा सहभागि भएपनि पनि कुनै स्थानिय तहमा उम्मेदवारी टुंगो लगाउन सकेको छनै् । राजपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको माँग संसदबाट फेल भएपश्चात् निर्वाचनमा सहभागि भएको हो ।
यस्तै सरकारमा सहभागी रहेको नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र समेतले हालसम्म जिल्लाको कुनै स्थानिय तहमा आफ्नो उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाउन सकेको देखिदैन् । मुलुककै पुरानो पार्टी नेपाली काँग्रेसले समेत उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाउन नसक्दा अरु दलहरुले पनि काँग्रेसकै उम्मेदवारहरुको पखाईमा रहेको श्रोतले जनाएको छ ।
उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा कार्यकर्तालाई गुमाउने डरले समेत अधिकांश राजनीतिक दल अहिलेसम्म पनि आफ्नो उम्मेदवार को भन्ने मुख खोल्न मान्दैनन् ।
त्यसैगरी, मधेशमा केवल राजपाले जित्ने र अरू सबै बढारिने हठबाजी गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालभित्र उम्मेदवार छनौटमा झन् बढी अन्यौलता देखिएको छ ।